Momba anay - Taili Industrial Co., Ltd.
Orinasa iraisan-tserasera iraisan'ny firenena eran-tany any Shina, mirotsaka amin'ny R&D, ny fanamboarana ary ny varotra.
Taili Industrial Co., Ltd. orinasan-tsonga iraisampirenena eran-tany any Shina, mirotsaka ao amin'ny R&D, fanamboarana ary varotra.
Ny orinasa dia mihazona ny foto-kevitry ny "miezaka, manova, mampiroborobo, mandroso" izay mandresy ny tsenany sy ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny vokatra miovaova sy avo lenta hatramin'ny taona niforonan'ny taona 1984. Nahita renivola 110 tapitrisa yuan ny orinasa ankehitriny ary 2 000 mahery no vita. mpiasa sy fanamboarana orinasa efa ho 50 000 metatra tora-droa. Ahitana mpiasa an'arivony sy mpizara mihoatra ny 50 000 mipetraka manerana ny firenena.
Ny orinasam-bola lehibe ao amin'ny Taili dia misy vokatra mihoatra ny 2000 izay voafaritra ao amin'ny fizarana 9 toy ny: switch, socket, circuit breaker, fitaovana fampitaovana amin'ny fantsom-pisakafoanana, mpandroana fandroana, fanaka fako, jiro, fitaovana elektronika ary automatique an-trano. Ireo vokatra ireo dia aondrana any Europe, Africa, Middle East, America South, Russia, Azia atsimo ary firenena hafa ary faritra. Ny kalitao vokatra tsara, ny fahaizan'ny R&D sy ny fandefasana baiko haingana dia tsy nahazo fankatoavana malaza avy amin'ny orinasam-pirenena marobe fa nametraka ny fiaraha-miasa maharitra ho azy ireo.
Maninona no mifidy Etazonia
Taili dia manohy mivoatra sy manavao hatrany ny vokatra azony mandritra ny fotoana. Miorina amin'ny fotodrafitrasa sy automatique avo lenta ary i Taili, tsy nitsahatra ny dingana fanavaozana ny automation sy ny fitantanana maoderina. Ny vokatra tsirairay dia tsy maintsy mandalo ireo fomba fiasa marobe amin'ny famokarana sy fanaraha-maso mahazatra. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny Taili dia manolo-tena mba handinika tsara ny antsipiriany momba ny vokatra sy ny kalitao. Betsaka ny fanamarinana efa nandalo ary noraisin'i Taili anisan'izany ny "CCC", "CB", "CE", "TUV", "VDE", "NF" ary "SAA". Ankoatra izay, i Taili dia nahazo ny anaram-boninahitra «Enterprise teknolojia avo lenta», «Zhejiang malaza marika vokatra», «Customs AEO Advanced Certification Enterprise» sy «crédit» hafa.
“Miorina amin'ny olona manana talenta; mandresy ny tsena miaraka amin'ny marika; mandroso amin'ny alàlan'ny fanavaozana; mitombo amin'ny fitokisana. Raha manatsara sy manavao ny ekipa R&D sy ny trano i Taili, dia mamolavola sy mampiroborobo ny rafi-pitantanana sy ny fahaizan'ny R&D. Ny andrim-pikarohana orinasa dia nahazo ny fankatoavana avy amin'ny governemanta faritany. Manohy mandroso hatrany i Taili amin'ny fanavakavahana, ny marika ary ny fanitarana. Na amin'ny vanim-potoana manokana, Mino foana i Taili fa handroso hatrany miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka i Taili handresy ireo sakana ary hitondra glance mifototra amin'ny kalitao sy serivisy tsara.